‘हजार जुनीसम्म’को पोष्टर सार्वजनिक, चलचित्र पुरानै मितिमा आउने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘हजार जुनीसम्म’को पोष्टर सार्वजनिक, चलचित्र पुरानै मितिमा आउने
डिसी नेपाल , ८ श्रावण २०७६
काठमाडौं । चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’को पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रको पोष्टरमा अधिकांश कलाकारलाई स्थान दिइएको छ ।
आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, अखिलेष प्रधान, सलोन बस्नेत, संचिता लुइँटेल, शिवहरी पौडेल, अनुभव रेग्मी लगायत पोष्टरमा छन् ।
गेष्ट रोलमा रहेका प्रियंका कार्की र दीपाश्री निरौलालाई भने पोष्टरमा समेटिएको छैन् । चलचित्रलाई विकासराज आचार्य निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा विकासराज र सामिप्यराज तिमिल्सिनाको लेखन छ ।
पोष्टर सार्वजनिक गर्दै यो चलचित्रको प्रदर्शन पुरानै मितिमा सारिएको छ । यसअघि चलचित्रले साउन ३० लाई प्रदर्शन मिति तोकको थियो ।
दक्षिण भारतिय चलचित्र ‘साहो’ले प्रदर्शन मितिसाउन ३० तोक्दा ‘हजार जुनीसम्म’ भदौं ६ गतेको लागि सरेको थियो । अहिले प्राविधिक कारण देखाउँदै ‘साहो’ भदौं १३ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ । योसंगै ‘हजार जुनीसम्म’ आफ्नो पुरानै मिति (साउन ३०)मा प्रदर्शनमा आउने निर्देशक विकासराज आचार्यले जनाए ।
भदौं १३ मा नेपाली चलचित्र ‘कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी’ र ‘मारुनी’प्रदर्शनमा आउँदैछन ।